सुन्दर देखिन के खाने? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
सुन्दर देखिन के खाने?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, जेठ १४, २०७९, १३:४३:००
प्रतिक मानिन्छ। अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन अनेकथरी गरिन्छ। क्रिम पाउडर घसिन्छ। तर, छाला शरीरकै अंग भएकाले बाहिरी कुराले भन्दा भित्री तत्वले अर्थ राख्छ। खानेकुराका कारण छाला प्रभावित हुन्छ। छाला स्वस्थ सुन्दर बनाउन के खाने?
अमला, कागती र भेडेखुर्सानी
भिटामिन सीयुक्त खाना खानाले छालाको क्षमता बढ्छ, छालाको लचकता पनि बढ्छ र छालालाई सुक्खा हुनबाट जोगाउँछ। अमला, सुन्तला, कागती, भेडे खुर्सानीजस्ता प्रचुर भिटामिन सी पाइने खानामा जोड दिनुपर्छ।
गाँजर, बदाम र सूर्यमुखी फूलको बियाँ
सी फूड, गेडागुडी र प्याज
ओखर र सोयाबिन
मौसम अनुसारको फलफूल खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा हुन्छ। फलफूलले समग्र स्वास्थ्यका लागि फाइदा गर्छ। छालामा सुन्दरता र चमक ल्याउन पनि मद्दत गर्छ।
के हो फिजिकल र केमिकल सनस्क्रिन? सनस्क्रिन दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा फिजिकल र अर्को केमिकल। फिजिकल सनस्क्रीनले यूभी रेजको (घाममा हुने) किरणलाई छाला भित्र छिर्न दिँदैन। शनिबार, जेठ ७, २०७९